Facebook Group တွေမှာ Business Run သင့်သလား? ဘာကြောင့် Run သင့်တာလဲ? -
အခုလိုကာလမှာ စီးပွားရေးကို အပြင်မှာ လုပ်တာထက် Online ပေါ်ကနေလုပ်လာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ပိုပြီးလုပ်လာကြတာကိုလည်းတွေရပါတယ်။ သက်ဆိုင်တဲ့ Facebook Group တွေထဲမှာ ကိုယ်ပြုလုပ်ရောင်းချမယ့် Product တွေကို ကြော်ငြာတာတွေ၊ ဝင်ရောက်မိတ်ဆက်တာတွေကိုတွေ့ရပြီး ဒီနည်းလမ်းက Group တွေမှာ ဝင်ရောင်တင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် အနည်းငယ်စိတ်ညစ်စရာတော့ကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီနည်းလမ်းက သင့် Business Value ကိုပိုတိုးသွားစေမဲ့ နည်းလမ်းလည်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ Facebook Group တွေဟာ Facebook ရဲ့ အရေး ပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းထဲကဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ Facebook မှာ Business Run နေတယ်ဆိုရင်တော့ Group တွေမှာပါ Strategy ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ Run မယ်ဆိုရင်တော့ သင် Facebook မှာ Run နေတဲ့ Business ရဲ့ Reach နဲ့ Engagement ကတော်တော်လေးကို ရလဒ်ကောင်းကောင်းတွေရရှိလာပါလိမ့်
Facebook Group နဲ့ Business တစ်ခု Run တော့မယ်ဆိုရင်တော့ Privacy ကိုတော့ ကိုယ်ကြိုက်သလိုထားနိုင်ပါတယ်။ Public ဖြစ်ဖြစ် Closed Group ဖြစ်ဖြစ်ကိုဆိုလိုတာပါ၊ Group Rules သတ်မှတ်တဲ့နေရာကတော့ အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အတွက် Rules တွေကို သင့် Business နဲ့သတ်ဆိုင်တဲ့ Rules ဖြစ်အောင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတဲ့ Group ထဲဝင်မဲ့လူတွေက သင် Business ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ လူတွေ Member ဝင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင့်ပါ။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ Rules အတိုင်းမလိုက်နာတဲ့ Member တွေကို Group ကနေ Kick ဖို့ဝန်မလေးပါနဲ့ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ မ Kick ပဲဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီးရောက်ရှိလာတဲ့ Member တွေကို ဂရုမစိုက်တဲ့ ပုံစံဖြစ်သွားတတ်လို့ပါ၊ တစ်ချို့ Member တွေ
ကပါ Rules ကိုမလိုက်နာတော့ဘူးဆိုရင်တော့ သင် Run မဲ့ Business အတွက်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Business Run မဲ့ Group ဖြစ်နေတော့ Entertainment Group တွေလို Rules က ပေါ့ဆလိုက်မယ်ဆိုရင် သင့် Business အတွက်နစ်နာမှုတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Rules ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထားဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Monday May 18th, 2020/ Blog/0Comment